ngomphathi ku 19-11-03
Le absorber shoka amaqela aphambili oko kubangela damping, kwaye indima yayo kukuba ukuphuphumala ngokukhawuleza Intshukumo imoto, ukuphucula indlela adhesion phakathi ivili kunye indlela, nokunciphisa kutshintshwe utyekelo umzimba imoto ebangelwe amandla inertia . Le absorber kukothuka nako uku ...
Abantu abaninzi ungathanda ukuba ulungise imoto yabo bafuna ukulawula ngcono. Enye yazo phantse kuyimfuneko utshintsho, nto leyo ukuthoba ukuphakama lomzimba endaweni ukumiswa yokuqala. Noko ke, ukuguqulwa ukuphakama imoto akukho kakhulu akunconywa, ukuba bathi oluchasene modifica ...
Spring plate, flat ipleyiti intsimbi yematshisi kujikwa, kukho iqela lamaqhosha isongiwe kwi kwisisu semoto kunye emthonjeni, kwelinye icala kunye isikhonkwane zixhonywe ihenga, kwelinye icala kunye ndiwele isisitheliso eqhagamshelwe girder, kangangokuba emthonjeni ongaba ibe owawusisibonakude. Okwangoku, kufanelekile ukuba ezinye nzima ...
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Hot Products - eKhaya - AMP Mobile Car Leaf Spring, Heavy Truck Leaf Spring 52crmnba, Wide Body Car Leaf Spring, Shacman Heavy Truck Parts Front Leaf Spring,